साना व्यवसायहरूका लागि नयाँ पीपीपी भुल्ने योग्य अवसरहरू • डचटाउनस्टा.लि. • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
साना व्यवसायहरूको लागि नयाँ पीपीपी क्षमायोग्य Oppण अवसरहरू
प्रकाशित फेब्रुअरी 23rd, 2021
हिजो, बिदेन प्रशासनले नियम परिवर्तन घोषणा गर्‍यो पेचेक संरक्षण कार्यक्रम (पीपीपी) साना व्यवसायहरूलाई अझ राम्रो पहुँच loansणमा मद्दतको लागि क्षमायोग्य loanण कार्यक्रम। नियम परिवर्तनको साथ दुई हप्ताको विशेष विन्डो हो जहाँ साना व्यवसायका अनुप्रयोगहरूले प्राथमिकता पाउँछन्। आवेदन अवधि बुधवार, फेब्रुअरी २th देखि शुरू हुन्छ।
संक्षेपमा: यदि तपाईं एक व्यक्ति व्यवसाय, एक्ल प्रोप्राइटर, स्वरोजगार, वा स्वतन्त्र ठेकेदार हुनुहुन्छ भने, यो पीपीपी getण प्राप्त गर्ने उत्तम अवसर हो। तपाईंलाई सबै आवश्यक छ तपाईंको २०१२ वा २०२० कर फिर्ताको तालिका सी र एक वित्तीय संस्था (आदर्श रूपमा तपाईंको बैंक) लागू गर्न।
साना व्यवसायका लागि विशेष अनुप्रयोग अवधि
यदि तपाईंको व्यवसायमा २० वा कम कर्मचारीहरू छन्, वा यदि तपाईं एक्लै प्रोप्राइटर, स्वतन्त्र ठेकेदार, वा स्व-रोजगार व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, तपाईं विशेष पीपीपी अनुप्रयोगको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। फन्डि formula फार्मूला परिवर्तन गरिएको छ सानो व्यवसाय मालिकहरूलाई बढी कोषमा सजिलो पहुँचको अनुमति दिन।
तपाईंले पहिले नै पीपीपी loanण प्राप्त गरिसक्नुभएको छ वा छैन, तपाईं यस राउन्डका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं २०१२ बाट २०२० को कुनै पनि क्वार्टरमा २%% वा बढीको राजस्व घाटा देखाउन सक्षम हुनुपर्नेछ।
कार्यक्रममा अतिरिक्त परिवर्तनहरू समावेश:
उत्कृष्ट विद्यार्थी studentण toणको कारण प्रतिबन्धको उन्मूलन
अपराधीलाई दोषी ठहराईएको व्यवसायका मालिकहरूका लागि सहज प्रतिबन्धहरू
गैर-नागरिक व्यवसाय मालिकहरूको लागि योग्यता
कसले receivesण प्राप्त गर्दछ जातीय असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि कदमहरू चाल्दै
लागू गर्न कहाँ
तपाईंको उत्तम शर्त भनेको तपाईंको बैंकमा पुग्नु हो यदि तपाईंसँग पहिले नै एक सम्बन्ध छ भने। यदि तपाईंसँग पहिले नै काम गर्न बैंक छैन भने, स्थानीय संगठनहरू मन पराउँछन् जस्टिन पीटरसन तपाइँलाई बैंक वा अन्य कोष स्रोतहरूमा उल्लेख गर्न मद्दत गर्न सक्छ। थप रूपमा, सेवाहरू जस्तै Biz2Credit तपाइँलाई मद्दत गर्न र रकम प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
क्यारोलटन बैंक साना व्यवसायहरूको लागि व्यक्तिगत एक अन सेवा प्रदान गर्दछ जसले पहिलो पटक पीपीपी loanणको लागि आवेदन दिन्छ। यदि तपाईले अर्को nderणदातासँग आवेदन गर्नु भएको छ तर प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नु भएको छैन भने, वा यदि तपाईलाई पछिल्लो अनुप्रयोगमा loanण अस्वीकार गरिएको थियो भने पनि ती मद्दत गर्न सक्दछन्। Ki१314--347--9671१ वा निक्की वुफेललाई सम्पर्क गर्नुहोस् nikkiwoelfel@carroltonbanking.com, वा zan१314-346--6310१० मा सुज्यान हफ वा suzannehough@carroltonbanking.com.
हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्छौं - आवेदन अवधि बुधबार, फेब्रुअरी २ on मा खुल्छ। जब तपाइँ आवेदन गर्नुहुन्छ, तपाइँले केहि जानकारी जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं कर्मचारी हुनुहुन्छ
२० वा कम कर्मचारीहरू भएका साना व्यवसायहरूका लागि निम्न कागजातहरू निश्चित गर्नुहोस्।
व्यवसाय आय कर रिटर्न
IRS 940 र 941 फार्म गर्दछ
निकाय गठन कागजातहरू
यदि तपाईं एकल मालिक, स्वतन्त्र ठेकेदार, वा स्वयं-रोजगारदाता हुनुहुन्छ
कर्मचारी बिनाका व्यवसायहरूलाई यी कागजातहरूको आवश्यक पर्दछ:
इनभ्वाइसहरू, बैंक स्टेटमेन्टहरू, वा अन्य रेकर्डहरू व्यवसाय देखाउँदै फेब्रुअरी १ ​​15, २०२० सम्म सक्रिय थिए
पीपीपी loansण धेरै केसहरूमा माफीयोग्य छ। अन्यथा, तपाइँ प्रति वर्ष १% कम ब्याज दरको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ पीपीपी क्षमा कार्यक्रम को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तपाईंको loanण १$०,००० भन्दा कमको लागि हो भने तपाईंले simple 150,000०3508-एस एकदम साधारण फाराम फाइल गर्नु पर्छ। तपाइँको nderणदाता तपाइँलाई यस प्रक्रिया नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
डचटाउन व्यवसायहरू समर्थन गर्नुहोस्
COVID-19 महामारी एक वर्ष को लागी हाम्रो टाउको मा लाग्यो। व्यापार जताततै संघर्ष गरिरहेका छन्। हामी आशावादी छौं कि तपाई यस जानकारीको उपयोग आफ्नो व्यापारलाई निरन्तरता दिनका लागि चलाउन सक्नुहुनेछ किनकि हामी उज्यालो दिनहरू हेर्दै छौं।
यस पृष्ठमा तपाइँको साथी व्यवसाय मालिकहरूलाई भेट्न को लागी सन्दर्भ गर्नुहोस् dutchtownstl.org/grants। र तपाईंको साथी छिमेकको व्यवसाय मालिकहरूमा सामेल हुनुहोस् डचटाउन व्यवसाय मालिकहरू फेसबुक समूह एक अर्को पीपीपी loansण र हाम्रो व्यापार खुला राख्छ कि केहि अरू को साथ मद्दत गर्न।
तल दायर गरिएको कारोबार. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार र Covid-19. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो फेब्रुअरी 23rd, 2021 .
DutchtownSTL.org कारोबार साना व्यवसायहरूको लागि नयाँ पीपीपी क्षमायोग्य Oppण अवसरहरू